‘पार्टीमा भइरहेको बहस पद प्राप्तिका लागि होइन’ - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home Exclusive ‘पार्टीमा भइरहेको बहस पद प्राप्तिका लागि होइन’
दाहाल–नेपाल समूहको निष्कर्ष
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र जारी बहस कुनै पद प्राप्तिका लागि नभएको शीर्षनेताले बताएका छन् । राजधानीमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा शीर्षनेताले पार्टीभित्रको बहस विचार, नीति, विधि, पद्दतिका लागि भएको बताएका छन् । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त, पम्फा भुसाललगायत नेता सहभागी भएका छन् । नेकपा अध्यक्ष दाहालले पार्टी बैठक चलिरहेकै बेला एकतर्फी रूपमा स्थगित गर्नु र छलफलमा सहभागी हुन नखोजेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । नेकपा अध्यक्ष एव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतर्फ इंगित गर्दै उनले पार्टी विधि, पद्दति नै नमान्ने हो भने दुर्घटना हुनसक्ने पनि औंल्याए ।
कसैलाई शक्तिशाली बनाउनमात्रै पार्टी एकीकरण नगरिएको बताउँदै उनले एकता भ¥याङ बनाउने र माथि पुगेपछि ‘अरुलाई फालिदिऊ’ भन्ने नसोच्न आग्रह गरे । ‘स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेकै बेला अर्का अध्यक्षको सक्रियतामा एमाले दर्ता भयो । सडकमा जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दावादका साथै मुर्दावादका नारा लगाउन थालियो,’ दाहालले भने, ‘मैले पनि पुर्वमाओवादी नेता जम्मा गरेर माओवाद र २१औं शताब्दीको जनवाद जिन्दावाद भने, ब्यानर राखे, भाषण गरे भने त्यो पार्टी एकताको पक्षमा हुन्छ त ? त्यो एकताका बेला बनेका सैद्धान्तिक सहमतिअनुसार हुन्छ कि पार्टी विभाजनतिर लाने कुराको उद्घोष हुन्छ ? तर, म अहिले पनि पार्टी एकता जोगाउन प्रयासरत नै छु ।’
पार्टी निर्णय स्वीकार गर्दा सरकार र पार्टी प्रभावकारी हुने बताउँदै दाहालले पूर्वपार्टीले मान्दै आएको विचारधारलाई लिएर नाराबाजी गर्न थालियो भने एकता बलियो नहुने बताए । सबैले पार्टी निर्णय मान्नुपर्ने बताउँदै उनले अध्यक्षले नै पार्टी निर्णय नमाने एकता बचाउन नसकिने दावी गरे ।
प्रतिक्रियावादीले गठबन्धन निर्माण गर्दाताकदेखि नै फुटाउन र कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजन गर्न उद्यत रहेको भन्दै दाहालले अहिलेको कलह त्यसैबाट सिर्जित भएको औंल्याए । अहिले आएर अनेक प्रचार गर्न खोजिएको भन्दै उनले वास्तवमा त्यस्तो नभएको प्रस्ट पारे ।
‘हामीले पार्टी एकताका बेला एमालेले अबलम्बन गर्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादी केन्द्रले अबलम्बन गर्दै आएको माओवाद र २१औं शताब्दीको जनवाद आत्मसात गर्दै त्यसलाई परिमार्जन गरेर जाने र हालका लागि समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद कार्यदिशा तय गरिएको थियो, महाधिवेशनसम्म त्यसलाई नै परिमार्जन गर्ने भनिएको थियो,’ दाहालले भने ।
जनताको बहदलीय जनवाद, २१औं शताव्दीको जनवाद र जनयुद्धबारे पार्टीको राजनीतिक दस्तावेजले उच्चसम्मान गरेको उनले बताए । नेकपा वरिष्ठ नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीमा ‘म नै राज्य, म नै पार्टी’ भन्ने प्रवृत्ति देखिएकाले समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गरे । पार्टी अध्यक्षले बहुमतको निर्णय मान्नुपर्ने बताउँदै आफू पनि अल्पमतमा पर्दा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न सक्नुपर्ने उनले बताए ।
यो पनि पढ्नुहोस डा. केसीको माग सम्बोधन गर्दै कर्णालीको आवाज श्रवण गर सरकार : कांग्रेस
‘मैले पनि धेरैपटक नोट अफ डिसेन्ट लेखेर बहुमतको निर्णय मानेको छु, अध्यक्ष नै पनि अल्पमतमा परे बहुमतको निर्णय मान्नुपर्छ,’ नेपालले भने, ‘पार्टी विधानको धारा ६० ले बहुमतको निर्णय नै पार्टी निर्णय हुने उल्लेख गरिएको छ ।’
नेकपाको सरकार र पार्टी दुवै अहिले विधानअनुसार नचलेको आरोप उनले लगाए । समाजवादको आधार तयार पार्ने भनिए पनि अहिले पार्टी र सरकारका गतिविधि त्यस्तो नदेखिएको उनले बताए । नेकपाभित्र अहिले देखिएको विवाद पदका लागि नभएर पद्दतिका लागि भएको उनको भनाई छ ।
ओलीले जनसंगठन, निकाय, विभागलाई पूर्णता दिन र एकता कार्यभार पूरा गर्न नसकेको नेपालले आराप लगाए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूखुसी अयोग्य र आफूगुटकालाई गोजीबाट फुत्त निकालेर नियुक्ति दिएको भन्दै नेपालले विधि, पद्दति मिच्ने काम भएको आरोप लगाए ।
भ्रष्ट, आसेपासेको संरक्षण हुने गरेको र गल्ती ढाकछोप गर्न, लुकाउन पार्टीका अरू सदस्यलाई, नेतालाई हिलो छ्याप्ने काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीप्रति नेता नेपालले आक्रोश व्यक्त गरे । ओलीले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा प्रोत्साहन गरेको, भ्रष्ट र आसेपासेको संरक्षण हुने गरेको, आफूसँग असहमत हुनेलाई शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरेको नेपालले बताए ।
वरिष्ठ नेता खनालले ओलीले चरम गुटबन्दी गरिरहेको आरोप लगाए । मदन भण्डारी फाउण्डसेनका नाममा वडासम्म कमिटी बनाउने, गुटबन्दी गर्ने र आफूहरूलाई बदनाम गर्ने काम गरिरहेको उनले बताए ।
पार्टीमा विधि, पद्दति, सिस्टमको कुरा ग¥यो कि पदका लागि झगडा गरिरहेको प्रचार गराउने गरेको उनले बताए ।
सचिवालय सदस्य एव प्रवक्ता श्रेष्ठले ओलीलाई रूपान्तरण गर्ने प्रयास असफल भएको बताए । विगतमा सहमति गरेर अघि बढ्ने र पार्टी, सरकारलाई प्रभावकारी बनाउँने प्रयास असफल भएको बताउँदै उनले नकारात्मक प्रवृतिका पात्रको भूमिका परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेकपामा देखिएको विवाद समाधानका लागि बुधबार अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच हुने भनिएको छलफल स्थगित भएको छ । बस्नु केही बेरअघि प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बुधबारको छलफल स्थगित भएको जानकारी दि“दै आज बिहीबार हुने जनाए ।
यो पनि पढ्नुहोस उपाध्यक्ष गौतमको मन्त्री बन्ने चाहनामा तत्काल पूर्णविराम
गत १० असारदेखि जारी नेकपा स्थायी कमिटी बैठक १३ साउनदेखि अनिश्चितकालका लागि ओलीले स्थगित गरेका छन् । तर, दाहाल सोही दिन बहुमत सदस्यसहित बैठक बसेका थिए ।
स्थायी कमिटीलाई निरन्तरता दिने दाहाल र सचिवालयबाटै समाधान खोज्ने ओलीको अडान अहिलेसम्म रहेको छ । चार दिनदेखि जारी छलफलमा ‘पहिला कुन कमिटी बैठक बस्ने ?’ भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन ।
पूजा चँदारा - September 26, 2020
विदुर र राममणिलाई पत्रकारिता पुरस्कार
कला राजधानी समाचारदाता - May 17, 2020
काठमाडौं । विगत दुई दशकदेखि चलचित्र पत्रकार संघले ७ जेठलाई चलचित्र पत्रकारिता दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ । विगतमा यसै दिन प्रदान गरिँदै आएको...
प्रदेश ७ रासस - June 21, 2020
यो पनि पढ्नुहोस पहिलो पटक पेरिस डाँडामा नेकपाको सचिवालय बैठक सुरु